သူမကိုယ်တိုင်က မိဘဖြစ်ခဲ့လို့ အခုလိုမိဘဆုံးရုံးသွားခဲ့တဲ့ကလေးတွေကို ကိုယ်ချင်းစာကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပြောပြလာခဲ့တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)….. – Cele Snap
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. မိတ်ကပ်အလှဖန်တီးရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ သုသု (ညီညီမောင် စမ်းချောင်း) ဟာဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ သုသုက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပုးပေါင်းပြီးရပ်တည်နေတဲ့အပြင် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း သူမကိုယ်တိုင် ချွေးနဲစာနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်လှူဒါန်းပေးနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်…။
သူမကိုယ်တိုင်လည်းလမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့သလို သူမရဲ့ Facebook Account ထက်မှာလည်း လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Postတွေကို အများပြည်သူသိရအောင် အမြဲတမ်းတင်ပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့မှာတော့ အသက်ပေးကြွေလွင့်သွားခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သမီးငယ်လေးအကြောင်းကို တင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
သုသုက ” ငယ်ငယ်ထဲက ဖခင်ဆုံးရှုံးသွားရသူမို့ 😔 ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောက်မှန်းသိပါတယ် မိဘမရှိတော့တဲ့ ကလေးဘဝဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲ…..😭 မိဘမဲ့တဲ့ကလေးတွေ သားသမီးဆုံးရူံးသွားတဲ့မိဘတွေ ထပ်မရှိပါစေနဲ့တော့ …. 😔 အိမ်မက်တွေသာဖြစ်လိုက်ချင်ပါတယ်…😔😔😔” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်….။သူမကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖခင်ဆုံးရူံးခဲ့သူမို့ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ပြီး ဝမ်းနည်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။
Source – Nyi Nyi Mg ( Sanchaung)’s Facebook
ပရိတျသတျကွီးရေ…. မိတျကပျအလှဖနျတီးရှငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ ပရိတျသတျတှခေဈြစနိုးနဲ့ချေါကွတဲ့ သုသု (ညီညီမောငျ စမျးခြောငျး) ဟာဆိုရငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနမှော ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျနတေဲ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ.။ သုသုက ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပုးပေါငျးပွီးရပျတညျနတေဲ့အပွငျ လိုအပျတဲ့နရောတှမှောလညျး သူမကိုယျတိုငျ ခြှေးနဲစာနဲ့ရှာဖှထေားတဲ့ငှကွေေးတှနေဲ့ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ပါဝငျလှူဒါနျးပေးနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျနျော…။
သူမကိုယျတိုငျလညျးလမျးပျေါထှကျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ လူထုလှုပျရှားမှုကွီးမှာ ပါဝငျခဲ့သလို သူမရဲ့ Facebook Account ထကျမှာလညျး လကျရှိအခွအေနနေဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ Postတှကေို အမြားပွညျသူသိရအောငျ အမွဲတမျးတငျပေးလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ။ မတျလ (၂၇) ရကျနမှေ့ာတော့ အသကျပေးကွှလှေငျ့သှားခဲ့တဲ့ ပွညျသူ့အာဇာနညျသူရဲကောငျးတှရေဲ့ ကနျြရဈခဲ့တဲ့ သမီးငယျလေးအကွောငျးကို တငျပေးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ.။
သုသုက ” ငယျငယျထဲက ဖခငျဆုံးရှုံးသှားရသူမို့ 😔 ကိုယျခငျြးစာပါတယျဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောကျမှနျးသိပါတယျ မိဘမရှိတော့တဲ့ ကလေးဘဝဘယျလိုရှဆေ့ကျမလဲ…..😭 မိဘမဲ့တဲ့ကလေးတှေ သားသမီးဆုံးရူံးသှားတဲ့မိဘတှေ ထပျမရှိပါစနေဲ့တော့ …. 😔 အိမျမကျတှသောဖွဈလိုကျခငျြပါတယျ…😔😔😔” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ဝမျးနညျးစှာနဲ့ ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ….။သူမကိုယျတိုငျလညျး ငယျစဉျကတညျးက ဖခငျဆုံးရူံးခဲ့သူမို့ ကလေးငယျလေးတှအေတှကျ ကိုယျခငျြးစာတဲ့ပွီး ဝမျးနညျးနတောပဲဖွဈပါတယျနျော…။
မြန်မာလက်ရှိအခြေအနေကို ကမ္ဘာကသိအောင် Miss Grand International စင်မြင့် ထက် ကနေ ၀မ်းနည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဟန်လေးဗီဒီယို…..